hypocalcemia (သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » hypocalcemia (သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်း)
hypocalcemia (သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်း) ကဘာလဲ။
သွေးတွင်း သွေးရည်ကြည်အတွင်း ကယ်ဆီယမ်ပမာဏရှိသင့်သည်ထက် နည်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
hypocalcemia (သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
hypocalcemia (သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အချို့လူတွေမှာ လက္ခဏာမပြတတ်ပါဘူး။ အာရုံကြောစနစ်ကိုသက်ရောက်နိုင်တာကြောင့် ကလေးတွေမှာ ကြွက်သားတွန့်ခြင်းတုန်ခြငးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စိုးရီမ်ပူပင်ခြင်း၊ စိတ်ကျခြင်း၊ ဆတ်ဆတ်ထိမခံခြင်းစတဲ့ စိတ်ခံစားချက်အပြောင်းအလဲများ
ပြင်းထန် သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်း လက္ခဏာတွေကတော့
hypocalcemia (သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းရင်းကတော့ သွေးတွင်းပျမ်းမျှပမာဏအောက် ပါရာသိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများနည်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်ေးတွနည်းခြင်းက ခန္ဓါကိုယ်တွင်းကယ်ဆီယမ်ကိုနည်းစေပါတယ်။ မျိုးရုးလိုက်ခြင်း သို့ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းခွဲစိတ်ဖယ်ထြုတ်ခင်း ဦးခေါင်းလည်ပင်းကင်ဆာကြောင့် ခွဲစိတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်းတွေကနေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အစားအစာမှာ ကယ်ဆီယမ်၊ ဗီတာမင်ဒီ လုံလုံလောက်လောက်မပါခြင်း
ဖီနိုင်တွိုင် (ဒီလန်တင်) ဖီနိုဘာဘီတယ်၊ ရိုင်ဖန်ပင်ကဲ့သို့ ဆေးများ
ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ နဲ့ကယ်ဆီယမ်စုပ်ယူမှုကို တားမြစ်တဲ့အခြားအူလမ်ေးာကာင်းပြဿနာများ
hypocalcemia (သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဗီတာမင်ဒီ ဒါမှမဟုတ် မဂ္ဂနီဆီယမ်နည်းခြင်းက သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေများစေပါတယ်။
သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
မွေးစကလေးတွေမှာ ခန္ဓါိကုယိက ကောင်းကောင်းမဖွံ့ဖြိုးသေးတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါသည်မိခင်ကမွေးတဲ့ကလေးတွေအတွက် ပိုမှန်ပါတယ်။
hypocalcemia (သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်း ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
ပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်ပမာဏကိုတိုင်းတာဖို့ သွေးစစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်းလက္ခဏာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်ခြင်းတွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်း ဆက်နွှယ် Chvostek’s and Trousseau’s signsတွေကိုလည်း စမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။ Chvostek’s signဆိုတာက မျက်နှာကိုထောက်ပံ့တဲ့အာရုံကြောကို ထိလိုက်တဲ့အခါမှာ ဆတ်ခနဲတွန့်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Trousseau’s signကတော့ တစ်ရှူးတွေဆီသွေးောထာက်ပံ့မှုနည်းသွားခြင်းကြောင့် ခြေလက်များအကြောဆွဲခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောဆွဲခြင်း ဆတ်ခနဲတွန့်ခြင်းက အပေါင်းရလဒ်ကိုဖြစ်စေပြီး ကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်းဆက်နွှယ်အာရုံကြောနဲ့ကြွက်သားဆိုင်ရာ တုန့်ပြန်မှုများခြင်းကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။
hypocalcemia (သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အချို့အခြေအနေတွေမှာ ကုသမှုမလိုဘဲ သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။ အချို့မှာတော့ပြင်းထန်နိုင်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ရုတ်တရက်ထဖောက်တဲ့အခါ ဆရာဝန်က ကယ်ဆီယမ်ကိုအကြောမှတစ်ဆင့်ထိုးပေးပါလိမ့်မယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းကhypocalcemia (သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်း)ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့်hypocalcemia (သွေးတွင်းကယ်ဆီယမ်နည်းခြင်း)ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
အများစုမှာတော့ အစားအသောက်ပြောင်းလဲရုံနဲ့ အလွယ်တကူကုသနိုင်ပါတယ်။
ကယ်ဆီယမ်၊ ဗီတာမင်ဒီ၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်ဖြည့်စွက်စွာများမှီဝဲခြင်း ပါဝင်သည့်အစားအစာများမှီဝဲခြင်း
နေပူစာလှုံခြင်းကလည်း ဗီတာမင်ဒီကိုများစေပါတယ်။ နေရောင်ထိတွေ့မှုလိုအပ်မှုပမာဏကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
နေပူမှာအကြာကြီးနေရမယ်ဆိုရင် နေကာခရင်လိမ်းသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ကယ်ဆီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာကို ညွှန်းပါလိမိမယ်။
https://www.healthline.com/health/hypocalcemia#outlook7. Accessed October 18, 2017.
Hypocalcemia Clinical Presentation.
https://emedicine.medscape.com/article/241893-clinical. Accessed October 18, 2017.